Nin Xaas uu horay u Furay ku Goowracay magaalada Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nin Xaas uu horay u Furay ku Goowracay magaalada Muqdisho
Nin Xaas uu horay u Furay ku Goowracay magaalada Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil dad badan ka argagaxeen oo shalay galinkii dambe ka dhacay xaafada Siliga Ameerikaanka ee degmada Wadajir ,kadib markii nin toorey ku hubeesnaa uu dilay gabar ay kala tageen.
Sida aan wararka ku helnay ninka ay kala tageen gabadha la dilay oo lagu magacaabayay Zamzam Cabdiwaaxid Daahir, ayaa weerar ku qaaday guriga ay degneed kadib markii ay ka biyo diiday in ay mar kale isku laabtaan .
Qoyska gabadha la dilay ayaa Warbaahinta u sheegay in ninka dilka geestay loo diiday in uu soo galo guriga balse markii dambe awood kusoo jabiyay albaabada guriga kadibna toorey ku dilay Zamzam oo horey u aheyd xaaskiisa balse dhawaan ay kala tageen.
“Marka hore inuu guriga soo galo ayaa loo diiday ninka dilka geystay, basle Aabaabda ayuu soo jebiyay, kadibna waxaa uu afka ka qabtay hooyadey oo fadhida guriga dhexdiisa, isaga oo markii dambe toorey qeybaha sare ee jirka ugu dhuftay Hooyo, anigana waan kasoo cararay goobta.”ayey tiri gabar yar oo dhashay hooyada la dilay.
Ciidamada amaanka ayaa ku guuleestay in ay gacanta kusoo dhigaan ninka dilka argagaxa leh u geestay gabadha ay kala tageen xili uu isku dayay in uu baxsado, waxaana saraakiisha gacanta ku heysa sheegeen in ninkan cadaalada la horgeyn doono.
Dilkan ka dhacay degmada Wadajir ayaana dad badan ka argagaxeen, waxaana gabadha la dilay aheyd hooyo heesta labo caruur ah, waxa ayna sababtay ninkan gacan ku dhiiglaha ah oo la sheegay in dhawaan kala tageen.
Previous articleWadooyiinkii xirnaa qaar magaalada Muqdisho oo dhagaxyadii laga qaaday
Next articleMan kills ex-wife in Mogadishu
Wax Garad ka wara bixiyey dhul ay leyhiin ay isku Dagaaleen...